Ny hoavin'ny finday | Martech Zone
Ny ho avin'ny finday
Alakamisy Febroary 6, 2014 Alakamisy Febroary 6, 2014 Douglas Karr
Isaky ny andro vitsivitsy dia mifamaly izahay sy ny zanako vavy hoe iza no manana tadim-pefy. Mitsiriritra ny tadiko aho ary avelany ao anaty fiarany ny tadiny. Raha samy manana ny isan'ny isan-jaton'ny tambajotram-bola ny finday… miambena! Nanjary ampahany amin'ny olona ny findaintsika. Ny tambajotram-pifandraisantsika amin'ireo namantsika, ilay mpitam-boky fitadidiantsika ankehitriny, ilay namantsika izay mampahatsiahy antsika ny zavatra hataontsika manaraka, ary na ny fanairana ataontsika hifoha maraina aza. Rehefa maty izy dia mahatsiaro very isika any an'efitra. 🙂
Inona no entin'ny ho avy? Raha ny fahitako azy dia hanjavona amin'ny fiainantsika ny birao, ny solosaina finday ary ny takelaka ary hanana finday tsotra fotsiny isika rehetra. Rehefa mipetraka eo am-piasana isika dia hisintona ny findaintsika fotsiny ary hijery azy eo amin'ny efijery misy eo alohantsika… toa ny Airplay miaraka amin'ny AppleTV miasa izao. Ny olana amin'ny tariby, ny cabling, ny fampifanarahana sns ... dia ho foana avokoa, isika rehetra dia hitantana ny fahita lavitra, ny radio, ny fiarantsika ary ny zavatra hafa rehetra amin'ny alàlan'ny finday. Hanjavona ireo orinasam-pifandraisana sy tariby satria ny finday dia lasa ivon'ny fifandraisana rehetra. Hanjavona mihitsy aza ny poketra satria azo hamarinina amin'ny alàlan'ny fitaovana finday ny famantarana antsika.
Antenaina fa eo anelanelan'ny fotoana izao dia hahitantsika ny fomba fanitarana ny androm-piainan'ny bateria amin'ny alàlan'ny fitaovantsika, hanafainganana ny fotoana famandrihana ary / na famaranana fampidirana master (tsy misy taxi)… mba tsy hiady amin'ny taribin'ny charger izahay sy ny zanako vavy!
izany infographic avy amin'ny Three manome antsika topy maso ny ho avy tsy ho ela amin'ny fananganana finday!
Tags: 2014201520162017ho avyiraisam-pirenenaFivarotana finday sy tablettefitomboan'ny findaystatistika findaymialohafinday avo lentaizao tontolo izao
Douglas Karr Thursday, February 6, 2014 Thursday, February 6, 2014
Ny fahombiazan'ny Marketing App Push Marketing
Ebook maimaim-poana: Milalao kilalao isa ianao?